Blog & Resource CenterKimroy Bailey2020-04-11T20:23:54-05:00
LEB LEL NA-AK TKỌ ​​TAA
Nzọụkwụ SITAR # 1 Ntaneti n'ịntanetị iji mụta otu esi ejikwa sistemu anwụ Bido Somata Mbara Igwe ugbu a
Mahadum Trott Bailey Makingme Billionaires Multifaceted Gaa na Mahadum Trott Bailey
Anyanwụ nwụnye Agụmakwụkwọ
Usoro usoro Gbaa mbọ hụ na ịjachapu ma ọ bụ mebisịa usoro mbara igwe gị Na-ekiri Solar Video Rasta Robot Mee ihe omume ọzọ ị ga - echezọ Hụ ngwugwu ihe a
#Wa # Robot Mmụta
RASTA ROBOT Si na onye mbido jekwuoro ọkachamara banyere nka Lelee Video Rasta Robot Na-ekiri Hotel Anyanwụ Vidio Kpee vidio Ezinaụlọ
Ọhụụ Ahụ Ike Anyị zuru ụwa ọnụ Global nwere ike ịnwe ikuku? Nwere ike ịzụta ya? Ọ na-akụ naanị na mba họrọ? Ifufe a na-edozi naanị Njikọ Njikọ Arab Arab? Dabere na Informationtù Na-ahụ Maka Ike Ike, mba iri, United States, Saudi Arabia, Russia na […] na-emepụta 69% nke ụwa mmanụ.
Mbara Igwe nke Onye Azụmaahịa ga-ekpuchi
Anyanwụ ike ka bụụrụ ọtụtụ mmadụ echiche ọhụrụ. Onye ahia nwere ike inwe otutu ajuju ka i gha jikere iji obi ike zaa ajụjụ ha niile. Mmetụta mbụ dị mma n'oge oge mkparịta ụka nwere ike ịbụ ihe dị iche na ịnweta ọrụ karịa onye asọmpi. Ya mere, ebe a bụ ndụmọdụ ole na ole na […]
Ihe dị iche iche dị na Anyanwụ Anyanwụ na-enyocha ihe ntinye maka ndị ntanetị obere Mbara Igwe
Mgbe m malitere azụmahịa ntinye nke anyanwụ m na Kimroy Bailey Renewables ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere ndepụta nke ihe ndị kwesịrị ịdị n'ọnọdụ iji bido n'ụkwụ aka nri. Edere m edemede a ma mepụta Nzọụkwụ site na Nzọụkwụ Mbara Igwe iji nyere ndị obere anyanwụ aka ka ịmalite na ụkwụ aka nri. Enwere […]
Yabụ ị nwere echiche dị ebube maka ime ezigbo ego site na ụlọ ọrụ anyanwụ na-arụ ọrụ ruru ijeri dollar ijeri ma ị nweghị ndị ahịa mbụ. Ebee ka ibido? Kedu ihe i kwuru? Kedụ ka ị ga-esi kwenye onye nwe ụlọ ịtụkwasị gị obi ịgbakwunye ike anyanwụ na ụlọ ha ma karịakwa na ego ha? Ọ bụrụ na […]
Top 3 Anyanwụ mehiere nke Solar Installers
N'ime afọ ise nke anwụ anwụrụala, emehiela m ọtụtụ anyanwụ n'okporo ụzọ m na-aga ịmalite azụmahịa ịwụnye anyanwụ na Kimroy Bailey Renewables. Achọrọ m inyere gị aka imeri usoro mmụta ọsọ ọsọ karịa ka m mere na ọ bụ ya mere anyị ji kee nzọụkwụ site na Nwụrụ Anyanwụ nwụnye […]
Vidiyo a bụ nke mbụ n’usoro anyị na nkuzi DIY na-akụzi na ntinye nke klọọkụ anwụ n’elu ụlọ dị larịị. A haziri nkuzi a ka ndị nrụnye ume ọhụrụ na ndị nwe ụlọ nwere mmasị ịwụnye obere usoro nke ha. Ọ na - egosikwa etu anyị siri bulie aluminom okporo ụzọ, jikọọ wires, igbe igwe, na ọsọ nke […]
KB Emegharia Robotics Camp 2016
Kimroy Bailey Robotics na Mahadum Teknụzụ, Jamaica esola na-ewepụta Saịtị, Robotics na Renewable Energy Camp nke ezubere iche. Izu izizi nke Roboti Robotics Ragawichi kpuchitere: Otu esi ewulite robot mkpanaka, mmemme, 3D Printing, Mobile App Creation na mmeghe nke Renewable Energy. N'izu nke abụọ nke ogige ahụ […]
Emegharia ume & Robotics Iji too aku na uba
Renewable Energy & robotics nwere ike itolite aku na uba ndi Jamaica nke ukwuu. Afọ iri anọ nke uto 0-1% mere ka ọtụtụ ndị ọgụgụ isi na-eto eto na-arụ ọrụ na mba ndị ọzọ ma wuo akụnụba ha. Isiokwu a na-ama ndị isi Jamaica aka ịchụso ume ọhụrụ & robotics iji nweta uto akụ na ụba dị mkpa nke ịlaghachi […]
Kimroy Bailey Emegharia Robotics Summer Camp
Kimroy Bailey Robotics na Mahadum Teknụzụ, Jamaica esola na-ewepụta ezumike ụbụrụ Sayensị, Teknụzụ, Injinịa na mgbakọ na mwepụ (STEM). Kimroy Bailey Rbotow Robotics Summer Camp na-akwadoro na Council Council Research Science na GENNEX; Ezubere iji gbanwee oke agụụ ụmụ akwụkwọ na mpaghara Sayensị, Teknụzụ na Innovation (STI) site na iji ihe na-adọrọ mmasị […]
Kimroy Bailey Robotics 14 Nnukwu Mmezu nke 2014
Afọ 2014 bụ nnukwu afọ! Oge efe efe. N'afọ ahụ Kimroy Bailey Foundation etinyere ikuku nke ikuku na-arụ ọrụ na 100% Renewable Community Center na Trelawny. Afọ ahụ a mụrụ Kimroy Bailey Robotics ma debe ya dị ka ihe omumu nke ndị Caribbean na-ewu ewu, ịkọpụta ngwaahịa na obere ụlọ ọrụ na-emepụta ihe. Hmmm ọtụtụ milestones ndị […]
BaileyBionic, Jamaican mere robotic aka
Kimroy Bailey Robotics doziri nnukwu ihe mmebi nke ndi Jamaican Technologies na Institute Institute nke Jamaican (PIOJ) Labour Market Forum. Thelọ ntu ahụ gosipụtara ọtụtụ teknụzụ ndị gụnyere gụnyere ụlọ ọrụ igwe mbipụta 3D na ngwa nbipụta; ihe osise nke BaileyBionic: usoro ụlọ ọrụ nke mmadụ dị ka robots na BaileyBotic: ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ robots ekwentị mkpanaaka. BaileyBionic bụ ihe nje […]
Robotics, Nmeghari ohuru maka oru ugbo & oru ugbo
Ntorobịa isonye na Jamaica ka bụ ezigbo ezughị ike. Olu nwatakiri enweghi ihe nlere na ime mkpebi na mmepe okike. Talk Up Yout '- okwu ngosi nke televishọn mba ahụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Emprezz Golding na - bụ otu n’ime usoro okwu ole na ole haziri iji kesaa echiche ụmụ ntorobịa n’ihe metụtara nsogbu ndị na-eto eto na nsogbu dị ka nsonaazụ ikpeazụ. Lelee […]